Safal Khabar - बंगलादेशका राष्ट्रपति जलविहार गर्न पोखरा जाँदै
बंगलादेशका राष्ट्रपति जलविहार गर्न पोखरा जाँदै
बिहिबार, २८ कार्तिक २०७६, ०९ : ५१
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद आज पर्यटकीय नगरी पोखरा जाँदै छन् । राष्ट्रपति हमिद आज बिहान ११ः३० बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पोखरा विमानस्थलमा पुग्ने कार्यक्रम रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले जानकारी दिए ।
पोखराको दृश्यावलोकन गर्न जान लागेका राष्ट्रपति हमिदको स्वागतको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । पोखरा विमानस्थलमा राष्ट्रपति हमिदलाई गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, कार्यवाहक मुख्यमन्त्री, मन्त्री, जनप्रतिनिधि, सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीले स्वागत गर्नेछन् । राष्ट्रपति हमिदको सम्मानमा पोखरा महानगरपालिकाले दुई झाँकी देखाउने तयारी गरेको छ । पोखरा विमानस्थलबाट फिष्टेल लजसम्म सर्वसाधारण, आमा समूह, नागरिक समाज, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिले स्वागत गर्नेछन् ।
राष्ट्रपति हमिदको भ्रमणलाई दृष्टिगत गरेर पोखरामा उच्च सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सबै सुरक्षा निकायको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए ।
पोखरा भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति हमिदले फेवाताल किनारा स्थित फिष्टेल लजमा आराम गर्नुका साथै केही समय फेवातालमा जलविहार गर्ने कार्यक्रम छ । जलविहारपश्चात नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट रुपा गाउँपालिकास्थित रुपाकोट रिसोर्ट पुगी त्यहाँबाट पर्यटकीय नगरी पोखराको दृश्यावलोकन गर्नेछन् । त्यसपछि, राष्ट्रपति हमिद आजै काठमाडौँ फर्किने छन् ।
१. कुमाताको दोश्रो संस्करण बजारमा
२. बैंकको ब्याजदरमा शतप्रतिशत छुट दिन व्यवसायीको माग
३. बेपत्ता भएका १२ जनाको शव फेला
४. नारायणी नदी उर्लिएसँगै बाढी र पहिरोको डर
५. खोलाले बगाँउदा चितवनमा एकजनाको मृत्यु
६. कोरोना भाइरसको उत्पती पत्ता लगाउन चीन पुग्यो डब्लुएचओको विज्ञ टोली
७. पहिरोको जोखिम बढेपछि ४३ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण
८. पशुपतिको जग्गा, व्यक्तिको रजाइँ
९. आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ? भारी वर्षाको अनुमान